Maxaad ka taqaanaa taariikhda maalinta jaceylka Valentine's day? | Raganimo University
Maxaad ka taqaanaa taariikhda maalinta jaceylka Valentine's day?
February 13, 2019~1 minute
14-ka bisha Febraayo ayaa lagu tilmaamaa maalinta jaceylka aduunka, iyadoo dad badan oo Soomaali ay ku jiraan ay u dabaaldagaan maalintaan. Dabaal dega maalintaan ayaa waxaa ka mid ah iyadoo lamaanayaashu ay isku hadiyeeyaan ubaxyo iyo fariimo jaceyl. Balse su'aashu waxay tahay maalintaan sidee ku noqotay maalinta jaceylka? yaase ka dambeeya?
Horta taariikhda maalintaan muran ayaa ku jira, iyadoo culumada taariikhdu ay isku qilaafsanyihiin. Waxaa la isku raacsanyahay in maalintaan ay xasuus u tahay wadaad Kiristaan ah oo lagu magacaabi jiri St. Valentine kaasoo boqortooyadii Roomanku ay daldashay ka dib markii lagu eedeeyay in uu ciidamada boqortooyadii Roomanka uu si qarsoodi ah isugu guurin jiray maadaama aan loo ogolayn in ay guursadaan. Ninkaan ayaa la daldalay taariikhdu markay ahayd 270 ka dib dhalashii Nabi Ciise (cs).
Balse dabaal degga maalintaan ayaa bilowdat waqti dhoow, iyadoo uu amray in loo dabaal deggo maalintaan boqor kiristaan ah oo lagu magacaabo Gelasius I balse waxay ahayd maalin diineed ee ma ahayn maalin jaceyl. Waxaa in jaceylka lala xiriiriyo ay bilaabatay qarnigii 14-aad iyadoo la sheego in uu ka dambeeyay gabyaa lagu magacaabo Geoffrey Chaucer.
Si kastaba ha ahaatee, maalintaan ayaa sida taariikhdeeda ku cad aan jaceylka wax shaqo ah ku lahayn. Waqtiga hadda la joogo ayay noqotay maalin ganacsi oo shirkaduhu ay kaga faa'idaystaan suuq geynta, iyagoo doonaya in ay dadka ka iibiyaan waxyaabo aysan u baahnayn. Sidoo kale dad badan ayaa is guursada maalintaan.